Halkan ka baro 10-ka Milkiile Kooxeed ee Dunida ugu Dhaqaalaha Badan “Sawirro” – Gooldhalin
Bundesliga Horyaallada La Liga Premier league Serie A WARARKA
Halkan ka baro 10-ka Milkiile Kooxeed ee Dunida ugu Dhaqaalaha Badan “Sawirro”
Muuse Abdi March 26, 2018	No Comments
In aad leedahay koox kubadda cagta ciyaarta uma baahna Hodantinimo aad ah (Balse Mas’uuliyad ayey u baahantahay) balse madaxda kooxuhu wey kala hodansanyihiin. Halkan waxaan idinkugu soo gudbin doonnaa 10-ka Taajir ee leh kooxo Kubadda cagta Ciyaara ahna kuwa ugu dhaqaalaha badan.
Nasiib wanaag wuxuu heystaa 4.800.000.000 oo Yuuro, waa Ganacsade reer Britain wuxuuna ku jiraa kaalinta 10-aad ee ah booska ugu hooseeya. Nimanka ugu dhaqaalaha badan ee kooxaha iska leh, White Hart Lane waxaa ka jira dhaqaale sare oo aysan dadku ka warqabin.
Waa Taajir ah reer Pakistan, wuxuu u guuray USA isagoo 16-jir ah wuxuuna nolosha Mareykanka ka billaabay Saxannada ayuu ka dhaqi jiray Baar laga cunteeyo. Wuxuu hadda heystaa lacag dhan 5.400.000.000 (Shan Bilyan iyo Afar Boqol oo Milyan) ‘Flex-N-Gate’ waa shirkad hagaajisa Agabka gaadiidka. Waana isha ugu weyn ee dhaqaalaha, Milkiilaha kooxda Fulham. Sahid Khan miyuusan noqon nin horumar la taaban karo sameeyay?
Uma baahna Macluumaad badan oo horudhac ah. Dunida oo dhan ayaa garanaysa Silvio Burlesconi, wuxuuna madaxweyne ka ahaa AC Milan Tan iyo 1986, waa milkiilaha shirkad warbaahineed oo ka mid ah kuwa dunida ugu afka dheer: Mediaset. Wuxuu heystaa lacag dhan 5.600.000.000 oo Yuuro.
Waa Hantiile ka taajiray Iibka Saliidda, waana Milkiilaha Chelsea wuxuuna kooxda qabsaday sanadkii 2003 tan iyo waqtigaasna waxay sameeyeen taariikh wanaagsan kooxda London. Wuxuu leeyahay ninkan oo Ruush ah, 6.900.000.000 oo Yuuro wuxuuna iibsaday ciyaartoy taariikh sameeyay oo hantay Champions League Sanadkii 2012.
Waa maalqabeen kale ‘Kroenke Sports Entreprises’ ayuuna leeyahay waana nin Jecel ciyaaraha, wuxuu heystaa hanta dhan 7.000.000.000 oo Yuuro waana Milkiilaha Denver Nuggets oo ka ciyaarta horyaalka NBA, Colorado Rapids oo ka Ciyaarta MLS, sidoo kale Colorado Avalanche oo ciyaarta NHL iyo Los Angeles Rams oo iyana ciyaarta NFL.
Maalqabeenka dalka Ruushka, sida Kroenke, waa nin isaguna jecel kubadda cagta. Waxaa lagu xasuustaa ‘Furriinkii Qarniga’, markaas wuxuu bixiyay 4.000.000.000 oo Yuuro oo uu siiyay Xaaskiisii hore, Rybolovlev waxaa uu ku sigtay in uu iibsado Manchester United mase suuragelin. Hadda wuxuu heystaa lacag dhan 8.500.000.000 oo Yuuro.
Madaxweynaha LA Galaxy waa mid ka mid ah dadka ugu hodansan Mareykanka dhanka Ciyaaraha wuxuu mahadinayaa Nasiibka siiyay 8.800.000.000 oo Yuuro. Wuxuu lacagta ka curiyay dhismaha waddooyinka Tareennada iyo Iibka Saliidda. Sida kooxdiisuba ay xustay, Philip waa milkiilaha Los Angeles Kings oo ka ciyaarta NHL.
Waad heli kartaa waxaad doonto haddaad jeebka ku heysato 12.000.000.000 bilyan oo Yuuro iwaxaadna noqon doontaa ninka Booska seddaxaad. Ninka reer Austria ayaa ka mid ah aas aasayaashii shirkadda Red Bull, waxayna heysataa shirkaddaas Formula 1 tartanka la yiraahdo oo loogu magac daray Red Bull Racing.
Milkiilaha kooxda Stade Rennais wuxuu sidoo kale leeyahay 60 shirkadood oo caan ah, amwaxaa ka mid ah Puma, Gucci iyo Yves Saint Laurent. Wuxuu hanta ahaan heystaa 15.000.000.000 oo Yuuro, waxaana muuqata in uu yahay Hodan isku filan, waxayna kooxdiisu ku jirtaa kaalinta 5-aad ee kala horreynta Ligue 1.
Hantiilaha kooxda Manchester City Sheikh Mansour bin Zayed bin Sultan Al Nahyan wuxuu ka yimid qoys Barwaaqo Sooran ah, wuxuuna kasoo jeedaa Abu Dhabi. Sidoo kale waa siyaasi sare oo United Arab Emirates, wuxuuna leeyahay shirkadaha waaweyn Virgin Galactic iyo Sky News Saudi Arabia, wuxuuna sidaas ku yahay Hantiilaha ugu lacagta badan kuwa kooxaha iska leh isagoo heysta 26.000.000.000 oo Yuuro.
Previous Previous post: Heegan oo Guul dirqi ah ka gaartay Plasma +Sawirro
Next Next post: Maxay ku kala Baxeen Dekedda iyo Wacaaf, yaase Garoonka Wiish ku ballansan galabta+Sawirro